Baahin: Khamiis, Feb 02, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Ciidamada is-bahaysiga Somaliya oo la wareegay degmada Badhaadhe, J. Hoose; Mashruuc lagu dhisayo waddo laami ah oo ay kala saxiixdeen D/Hoose Bossaso & shirkada El-Gur; William Hague, xog-hayaha arrimaha dibedda ee Britain oo booqasho ku yimid Muqdisho; Xulka gobolka Mudug oo 2 – 1 kaga badiyey xulka Sool. – Radio Daljir
Baahin: Khamiis, Feb 02, Khadar Cawl ~ Daljir ~ Buuhoodle. Ciidamada is-bahaysiga Somaliya oo la wareegay degmada Badhaadhe, J. Hoose; Mashruuc lagu dhisayo waddo laami ah oo ay kala saxiixdeen D/Hoose Bossaso & shirkada El-Gur; William Hague, xog-hayaha arrimaha dibedda ee Britain oo booqasho ku yimid Muqdisho; Xulka gobolka Mudug oo 2 – 1 kaga badiyey xulka Sool.
Febraayo 2, 2012 12:00 b 0
Dad rayid ah oo lagu dilay magaalada Gaarisa.
Baahin: Arbaca, Feb 01, Axmed Jookar ~ Daljir ~ Bossao. 11 qof oo rayad ah oo ku dhimatay shil laba gaari oo isku dhacay duleedka Galkacyo; Tartanka ciyaaraha gobollada Puntland oo maanta ka bilawday Garowe; Ciidanka dawlada federaalka oo qabsaday deegaanka Hoosingow, J. Hoose; Warbixin ku saabsan mashruuca balaarinta & dayactirka dekeda Bossaso.